Golden Chief |
New mpilalao ihany. 30X Wagering fepetra takiana, Max fiovam-po dia mihatra x4. £ 10 Min. petra-bola. Slot lalao ihany. T & C ny Ampiharo.
New Players ihany. 30X Wagering Requirements, Max conversions X4 applies.£10 Min Deposit.Slot Games Only.T&c'sapply
Golden Chief dia vokatry ny siantifika Games. Mpilalao mahay mitendry izany slot amin'ny finday fitaovana araka ny Azo ampiasaina araka ny fandoavam-bola amin'ny finday slots milina. Ny lalao dia mifototra amin'ny Red Amerika Avaratra Indiana sy manome tsara tombony kely ny lafin-javatra mba hitandrina ny mpilalao mpijery. Vakio ny hevitra eto ambany mba hahalala bebe kokoa.
Rehefa miezaka hahafantatra ity Mobile Payment Slots
Golden Chief-tserasera slot manana 4 andalana sy ny 5 reels. Ianao manomboka amin'ny voalohany 10 paylines izay afaka mitsangana ho 100. Izany finday slots fandoavam-bola dia manana fototra manan-karena amin'ny vato sy ny Mena tepees Indian hita maso.
Manana sokajy roa ny marika eo amin'ny reels. Ny voalohany dia ny iva-danja nitsinjaka karatra sary masina ny A, J, K, Q, 9 ary 10. Ary ny faharoa dia avo-zava-dehibe ireo sary masina, ary ahitana ny totem pole, orsa volontsôkôlà iray sy ny vehivavy Indian Mena.
A Golden Bonus Wild Ary Icon
Ao amin'io fandoavam-bola an-tserasera slots milina finday, manana Wild kisary mifanitsy amin'ny mariky ny bibidia maro loko. Io bibidia hafa mahasolo marika eo amin'ny reels, nefa tsy Golden Bonus hanely mariky. Izany ihany koa ny slot dia tonga noho ny Lehiben'ny Fitoriana Wild.
Io, dia hamelatra ny bibidia ka hasarony ny rehetra miraingiraingy azon'ny izay no hita sy hanampy amin'ny fipetrahana mandresy tsikombakomba. Izany koa dia hampitombo ny lalao ny payline ho eo 50 ary 100. Na izany aza, izany no miankina amin'ny sanda nofatorany teo amin'ny tsatokazo.
Ny Golden Bonus Feature Ny ity Mobile Payment Slots Machine
Ny hatsaran-tarehy io fandoavam-bola an-tserasera finday slots milina dia fa manana olona maro tambin endri-javatra. Misy endri-javatra Golden Chief Bonus. Io manodidina no niteraka rehefa tanety, fara fahakeliny, 3 Golden Bonus hampiely fanehoana an'ohatra eo amin'ny toerana hita maso eo amin'ny reels. Rehefa izany dia tratra, afaka milalao any amin'ny mini-manaraka ny lalao.
A Free Spins: Ianao omena 5 maimaim-poana spins am-piandohana. Ireo Free Spins azo niloka ho an'ny sokajy ambony indrindra ny 30 maimaim-poana spins. Ny tombon-dahiny ny filokana dia fa afaka ihany koa ny very ny 5 maimaim-poana spins.
A Cash Canyon: Eto tsy maintsy mihodina kodia ny harena mba handray vola valisoa.
A totem harena Bonus Feature: Ho maintsy hifidy totem bao mba haneho multipliers. Ho mianika tohatra ny hetsiky rehefa hanazava ny hetsiky soatoavina. Rehefa tonga ny fara tampony, dia manangona ny valim-pitia. Ka vao dimy Golden Bonus aelezo fanehoana an'ohatra. Ho hahazo lehibe-iray eny vola valisoa.
Afa-tsy ny endri-javatra voalaza etsy ambony, misy ihany koa ny Big Bet sy ny Zava-miafina Symbol tombony bebe kokoa endri-javatra mba manintona ny slot mpilalao. Ity lalao ity dia manana RTP ny eo 94.12% ary 98.14% izay ampy mba hitaona mpilalao manatrika ity slot.
Terms Ary Condition – Herinandron'ny Paska
inona no velona Casino
milalao velona Casino